Kubudirira Pamhepo Kunotanga neCXM | Martech Zone
Kubudirira Pamhepo Kunotanga neCXM
Mugovera, Chivabvu 4, 2013 Svondo, May 5, 2013 Gary Galvin
Mutengi Chiitiko Management inoshandisa tekinoroji kupa chako pachako uye chinoenderana chiitiko kune wega mushandisi kuitira kuti ishandure tarisiro muhupenyu-hurefu vatengi. CXM inosanganisira kushambadzira kuri mukati, zvakasarudzika zviitiko zvewebhu, uye nehurongwa hwehukama hwevatengi (CRM) sisitimu yekuyera, kuyera uye kuyedza kudyidzana kwevatengi.
16% emakambani ari kuwedzera yavo yemadhijitari yekushambadzira mabhajeti uye kuwedzera kwese kushandisa. 39% yemakambani ari kuwedzera yavo yemadhijitari yekushambadzira mabhajeti nekumisikidza bhajeti riripo mukushambadzira kwedigital. Zvinoenderana neavo nemamwe manhamba kubva a 2013 mushumo kubva kuSosaiti yeDhijitari maAgency, Simba rekuita mukati uye kudzoka kwekudyara kushambadzira pamhepo zvinopfuura zvakanakira kushambadzira kwechinyakare senge TV, pepanhau, mabhodhi kana redhiyo. Kugona kugadzira 1-on-1 kubatirana nevatengi, vanotarisira uye zvazvino, kwagadzirisa shanduko nekutengesa nyika. Zvese izvo zvinogoneka kuburikidza neCXM.
Keys kuCXM Kubudirira
Kukwezva Vatengi Vatsva kune Yako Saiti - Uchishandisa yakaratidza inbound kushambadzira marongero, vatengi vatsva vachaunzwa kune yako saiti kuburikidza nesocial media, SEO, mablog, vhidhiyo, whitepapers, uye dzimwe nzira dzezviri kushambadzira.
Kuita Yako Webhusaiti Vashanyi - Hunza meseji yako kuhupenyu kumunhu wega wega mushandisi kuburikidza neyakagadzirirwa zvemukati zveumwe neumwe mushanyi zvichienderana nemaitiro avo. Izvi hazvingovati vaone chete meseji yavari kutsvaga, asi makambani akashandisa nzira idzi aona kukura kwemari uye 148% inodzoka pane yavo mari. Vaviri izvi neashandisi-inoshamwaridzika, inowirirana dhizaini uye yakasimba yezvinyorwa zano uye iwe une yakasimba base yekumisikidza yako kutengesa uye kushambadzira kuyedza kubva.
Kutevedzera Salesforce CRM - CRM kunyorera kunoshanda senzvimbo kune vese vatengi ungwaru, iyo inogonesa makambani kutora data rakakosha kubva kune ese kushambadzira kuedza uye kuwedzera kushanda kwezvavanotengesa zvekuedza.
Kuchengetedza Vatengi uye Tarisiro - Kuburikidza nekushingaira kwekuita kana mushandirapamwe we "kubata", ikozvino kuchengetwa kwevatengi kunogadziridzwa. Iko kushandiswa kwekushambadzira otomatiki uye kusanganisira variko vatengi mune yako inbound kushambadzira kuyedza inzira dzekubudirira mukuchengetedza kwevatengi.
Tags: 2013 nzanga yemadhijiti edhijitari inoshuma2013 mushumo wesodaCRMmutengi ruzivo manejimendimutengi wehutano hwehukamacxmgalvin matekinorojigalvintechnzanga yemadhijiti edhijitariSoDa
Gary Galvin ndiye mutungamiri uye muvambi we Galvin Technologies - webhu uye software yekambani muIndipolis, IN. Akatanga kambani aine chiono chekuva nekambani inoisa mwero wekuti mapurojekiti anofambiswa sei nemazvo. Nekutarisa zvakanyanya pakuvaka yakasimba software software maitiro uye kuona pa-nguva uye mu-bhajeti kuendesa, Galvin Technologies yakakwanisa kuve mutungamiri muindastiri. Gary anobva kuDetroit, MI asi anodada kufonera Indiana kumba nemukadzi wake nevana vana.
2013 SoDA Chirevo: Dhijitari Kushambadzira Outlook